Qurbajoogta Puntland ee Yurub oo ku dhawaaqay urur siyaasadeed Cusub – Radio Daljir
Seteembar 20, 2012 3:26 g 0
Swden Sep 20 2012 Jaaliyada Puntland ee dalka Sweden ayaa Sheegay inay sameeyeen urur siyaasadeed ay sheegeen inuu ka qayb noqonaya nidaamka asxaabta badan ee Puntland ururkan oo la magac baxay Puntland Social Democracy Part, ayaa lagu yagleelay magaaladda Gotern Peg oo dalka Sweden.
Cabdrisaaq Yuusuf Faarax oo sheegay inuu hogaamiye u yahay ururkan ayaa lasoo xiriiray Radio Daljir kana hadlay qaab dhismeedka ururkan.
Gudoomiyaha ururkan PSDP wuxuu sheegay in dhowaan oo xafiisyo ka furan doono ururkani guud ahaan goboboladda Puntland.
Ururkani wuxuu noqonayaa kii u horeeyey oo lagu dhawaaqo tan iyo intii la fasaxay furashada asxaabta Puntland, waxaana horyaala oo laga sugayaa shuruudihii gudiga doorashooyinka KMG ah ee Puntland ku xireen cida rabta inay furtaan urur siyaasadeed.
Faah-faahin khasaaraha qaraxyadii caawa Muqdisho ka dhacay.